China laa azu ịkpakọba nche anwụ 3413 rụpụta na Factory | Sebter
Car nchekwa hama agbara nche anwụ agbajikwa window windo ngwaọrụ-n'ịnyịnya multi-ọtọ nchekwa hama gbajiri window nche anwụ mberede hama abụghị mmiri ndị mmadụ na ụgbọala 3413SBT
Multi-ọtọ: Enwere ike iji ya dị ka nche anwụ, nche anwụ na nchekwa na hama nchekwa.
Ntughari azu: nche anwụ na-atụgharị elu na mpụga, mmiri mmiri nke nche anwụ na-atụgharị ma n'ime, ọ gaghị mmiri ụgbọ ala ahụ; mgbe nche anwụ na-agwụ ike, ike ọgụ nwere ike ịdị na ala; ọ bara uru karịsịa mgbe ị na-akwọ ụgbọala na ụbọchị mmiri ozuzo. Mgbe ịpụpụrụ ya, ọ na-adịrị ndị mmadụ mfe ịbanye n'ụgbọala, o yikarịghị ka mmiri ozuzo jidere ya.
Umbrella etiti siri ike: A na-eme aluminom alloy alloy alloy, nke a na-acha ọkụ ọkụ, ka mma na windproof, corrosion na-eguzogide, siri ike ma na-adịgide adịgide.
Nnukwu akwa nche anwụ na-egbochi mmiri: A na-eme akwa akwa nche anwụ nke ihe dị elu na-enweghị mmiri, na elu akwa akwa ahụ nwere ihe nkiri na-enweghị mmiri. Ọ ga - apụ apụ mgbe mmiri zoro ezo. Ọ dịghị mfe mgbochi mmiri nche anwụ. Enwere naanị oji ojii n'ime akwa nke nche anwụ, nke nwere ike igbochi ụzarị ultraviolet ma chebe anyanwụ; O buru ibu karia nche anwụ izugbe ma nwee nchebe karịa.
Umbrella polo na-agbakwụnye ihe eji arụ ụlọ: nche anwụ na-eme nke igwe anaghị agba nchara, ihe akwụrụ akwụrụ na-agbatị nke ọma, kwụsie ike ma ghara ịma jijiji, otu bọtịnụ na-akpaghị aka na mmechi, otu aka na-arụ ọrụ, na-adaba adaba.
Aha: Igha nche anwụ na nchekwa hama, ụgbọ ala nchekwa hama, multi-ọrụ nchekwa hama
Ihe: vinyl, igwe anaghị agba nchara, alloy alloy, wdg.
Arọ: 400 G
Umbrella ákwà akwa: 210 T
Number nke nche anwụ na-anọchi：10 PC, 5 agba
Umbrella elu dayameta (mgbe emeghe): 105 cm
Elu nke nche anwụ (mgbe imepe): 60 cm
Umbrella obosara (mgbe a tụbara ya): 5 cm
Umbrella dị elu (mgbe a tụbara ya): 31 cm
E nwere ụdị abụọ: izugbe nche anwụ na-eche nche anwụ na nchekwa hama.
Anyị nwere ndị otu ọrụ dị oke egwu iji jụọ ajụjụ n'aka ndị ahịa. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ "100% afọ ojuju ndị ahịa site na ngwaahịa anyị mma, ọnụahịa & ọrụ otu anyị" ma nwee ezigbo aha n'etiti ndị ahịa. Na ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, anyị nwere ike inye ọtụtụ dịgasị iche iche nke orylọ Ọrụ Na-ere Car Shade Umbrella New Portable Folding Sunscreen Heat Insulation Car Sunshade Umbrella, Anyị na-ekwe nkwa ịnwa ike kachasị anyị ịnapụta gị ngwaahịa na ọrụ dị elu na echekwa.
Anyị arụ ọrụ kemgbe afọ iri na ise. Anyị raara onwe anyị nye ngwaahịa na azịza yana nkwado ndị ahịa. Anyị nwere ikikere ngwaahịa 80 ugbu a.
Nke gara aga: Car ụlọ Pedal 7904
Osote: Umbrella na windo windo emebi 7902
Auto Glass emebi
Car Glass emebi
Car Glass emebi Ngwá Ọrụ
Car Obere windo emebi
Car Multifunctional Window emebi
Car Safety Window emebi
Car Window emebi Keychain
Car Window emebi Ngwaọrụ
Car Window Glass emebi
Mberede Car Glass emebi
Mberede Windo Mberede
Ihe na-emebi ihe
Rain Umbrella na windo emebi
Kpochapụrụ na Static Eliminator 0903A
Car mara mma static eliminator Anti-static ca ...